I-PAX 3-Sihlalutya eyona vaporizer iphambili ye-premium | Iindaba zeGajethi
Ukucoca kuye kwaba "smart", ukukhanyisa isibane kuye kwaba "smart", iiresiphi ziye "smart" ... Ukutshaya kwakuza kuba smart nini? Kulungile oko kwenzeka ngokusungulwa kwe-PAX 3, i-vaporizer edityaniswe ngokupheleleyo kwisixhobo sethu esiphathwayo esenza ukuba ingabi ngamava kuphela, kodwa ikwadityaniswa.
Sinezandla zethu kwi-PAX 3, umphunga okrelekrele onokuthi ube nepremiyamu kunye namava axhunyiwe. Hlala nathi kwaye ufumanise okhethekileyo ngesi sixhobo sinomdla kwaye kutheni iye yaba "yipremiyamu" imveliso kungekudala.
Kwisixhobo seActualidad sizimisele ukusoloko sikulethela itekhnoloji, kwaye yonke into iba lula ukuba uqhagamshele. Sihlalutye imitshayelo edityanisiweyo, izithethi ezixhunyiwe, izixhobo zokucoca izinto ... Abavelisi be-PAX bacinga njalo kwaye apha sinesizukulwana sabo sesithathu. Fumanisa kuthi ukuba zeziphi iimfihlo zayo, ubuhle bayo kunye neziphene zayo. Ukuba uqinisekile, nantsi ikhonkco lokuthenga elona xabiso libalaseleyo.
1 Uyilo kunye nezixhobo: YIPREMIUM
2 Yintoni umphunga kwaye yenza njani le PAX?
3 Umxholo wephakheji kunye nendlela yokuyisebenzisa
4 I-PAX Vapor App-I-vaporizer yakho ngoku ikrelekrele
5 Uluvo kunye namava omsebenzisi
Uyilo kunye nezixhobo: YIPREMIUM
Sinezixhobo zesilinda zobungakanani obulinganiselweyo, ngokuchanekileyo imilinganiselo yi-9,8 x 3 x 2,16 iisentimitha kwaye inobunzima be-39 gram kuphela. Yakhelwe kwialuminiyam ene-anodized yokufaka ngaphandle, ngelixa iziphelo zibangelwa zezixhobo esizibekayo, ezingekho mbalwa. Siza kuba nakho ukuyifumana ngemibala emine: Matte Black; URose Gold; Isilivere kunye neTeal, kwitheko lethu sikhethe oluhlaza lwetal, imodeli yeti, kuhlalutyo olunzulu lwayo.
Imilinganiselo: X x 9,8 3 2,16 cm
Ubunzima: I-93 gram
Ngasemva sinesipin sokuqhagamshela esinemagnethi kwitshaja, ngelixa icala langaphambili lithweswe isithsaba ngu "X" (wePAX), ethi yona isebenze njengesibonisi se-LED esinokwazi ngaso ubume bayo maxa onke. Ibhetri nokunye okuninzi. Ukuziva ngaphakathi kwesandla kwangoko kuyipremiyamu, yakhiwe ngokugqwesileyo, kwaye ngokuqinisekileyo inomtsalane ngakumbi kunayo nayiphi na enye imveliso. efanayo kukhuphiswano. Kuyilo kunye nokuphatheka, kukude kakhulu kwezinye iindlela ezizezinye kwintengiso.
Yintoni umphunga kwaye yenza njani le PAX?
Eyona nto ibalulekileyo kukuba, i-vaporizer isebenza ngokufana nayo nayiphi na i-cigarette ye-elektroniki. Ngokusisiseko banoluhlu lwezinto ezichasayo kunye nebhetri egcwalisekayo, etshisa imveliso oyifunayo ukuvelisa umphunga. Nangona kunjalo, le PAX 3 inomahluko ophawulezileyo ngokubhekisele kwezinye iimveliso, yenzelwe ukuhambisa umphunga wamagqabi, oko kukuthi, izinto zendalo esizazisa ngqo kwi-casserole apho zifudunyezwa khona ukuze sitshaye imifuno ebalulekileyo, Ukongeza ukubandakanya isitya apho unokubandakanya khona imixube.
I-PAX 3 ine-3.500 mAh ibhetri oko kuyakufudumeza a isitovu esinomthamo ophakathi kwe-0,15 gram kunye ne-0,4 gram kuxhomekeke kwiminqwazi esiyisebenzisayo (efakwe kwipakethi) nakwizinto esigqiba ukuzitshaya. Ukufudumeza kokuqhutywa kwale PAX kunye neebhetri zayo ezingama-3.500 mAh zibonelela malunga nemizuzu eli-100 yokusetyenziswa kangangemizuzu engama-90 yokutshaja.
Umxholo wephakheji kunye nendlela yokuyisebenzisa
Sifumene i Gcwalisa ikhithi ye-PAX 3 kubandakanya:
Isiseko sokutshaja Magnetic nge-USB
Isiciko sokongeza imixube
Isiciko somthwalo wesiqingatha sesitovu
Isivalo esipheleleyo somthwalo esitovini
Ukucofa kunye nokucoca isixhobo
Sebenzisa kulula, Into yokuqala esiyicebisayo kukuhlawuliswa ngokupheleleyo kwaye ukhethe ukuba loluphi uhlobo lomlomo oza kulusebenzisa, kubasebenzisi bexesha lokuqala akukho nto ifana nomlomo wokuqala. Emva koko sikhetha imveliso esiza kuyifaka kwisitya: izityalo eziyimfuneko okanye ukugxila. Sisebenzisa isiciko esihambelanayo, cinezela imveliso (ukuba ngamayeza esintu) kwaye wazise umxholo. Kubalulekile ukuba icinyiwe ukuze ingasoyikisi.
Ngoku siza kucofa kwiqhosha lamandla. Xa siyilayita iya kuhlala malunga Imizuzwana eyi-15 nge-LED Imfusa (isibonisi sokufudumeza), xa ijika iluhlaza kukuba siyafumaneka ukuba sitshaye. Kwenzeka into efanayo nakwifayile ye- uhlengahlengiso lobushushu, sine: Inqanaba 1 - 182ºC; Inqanaba 2 - 193 ° C; Inqanaba 3 - 204ºC kunye neNqanaba 5 - 215ºC. Ukuyiqwalasela, siza kubamba iqhosha lamandla kwimizuzwana embalwa kwaye ucinezelo ngalunye luya kukhetha inqanaba (okanye silwenza ngokuthe ngqo kwisicelo sePAX.
I-PAX Vapor App-I-vaporizer yakho ngoku ikrelekrele
Nge-PAX 3 sinesicelo esifumanekayo iOS kunye Android eya kusivumela ukuba sikhethe ngaphakathi kuluhlu olupheleleyo lwamaqondo obushushu xa sele sidibanise i-PAX 3 yethu kwisixhobo esiphathwayo ngonxibelelwano lweBluetooth, ngokulula ngokulula. Nje ukuba sibe ngaphakathi sineendlela ezahlukeneyo zohlengahlengiso kuzo zombini izibane ze-LED (indibaniselwano ebomvu, emthubi naluhlaza okwesibhakabhaka). Singahlengahlengisa amanqanaba ngendlela esithanda ngayo kwaye siphumelele, kodwa kuyacetyiswa ukuba uthathe ithuba lokukhetha okungagqibekanga esikunikwa yiPAX.
Sinezona ndlela zilandelayo:
inkxaso Imo yaso: Isigcina isitovu sisoloko shushu rhoqo kwiiseshoni ezikhawulezayo kunye nomsi omkhulu
Ukusebenza kakuhle Indlela: Yandisa ngokuthe ngcembe amandla esitovu ukufinya amayeza
isongo Indlela: Sitshisa isitovu xa ucofa incasa engcono kunye nomphunga ogudileyo
I-Stealth Imo: Ukupholisa ngokukhawuleza ukutshaya okungaqhelekanga.
Into yokuqala kukukhumbula, tSiza kuba nemvakalelo eyahlukileyo kuleyo inikezelwa yi-cigar yesiko okanye ivape enamanzi, Kuba isixa somphunga sincinci, ingenguye umxholo wesikhwehlela ngasinye.
Uluvo kunye namava omsebenzisi
Ngokusetyenziswa kwam, iiparameter ezibhengeziweyo zale mveliso ziyafezekiswa ngokupheleleyo, kwinqanaba lokudibana nakwinqanaba lokuzimela nokusebenza. Yimvakalelo enqabileyo oya kuyisebenzisa, kodwa yintoni efanelekileyo kukumiselwa kunye namandla okwenza ngokwezifiso ngokubonga kunxibelelwano oluqilima olunikezelwa sisicelo, kulula ukuyisebenzisa kwaye inomdla kakhulu. Ngokuqinisekileyo ayibizi xa sijonga ezinye iindlela kwintengiso, kodwa njengoko besitshilo kwasekuqaleni, le yimveliso yeprimiyamu. Ungazenza naye ukusuka kwi-euro ezingama-199 kwiAmazon kuba eyona ndlela yokuzama yonke into, Ngaphandle kwamathandabuzo, zikwizixhobo eziqhagamshelekileyo nezikrelekrele eziququzelela usuku lwakho ukuya kwimini, njengamaxesha onke, kwiActualidad Gadget.
Uyilo olukumgangatho ophezulu kunye nezixhobo
Yenza ngokwezifiso iApp
Ngamanye amaxesha kuyatshisa
Inzima kwabo bafuna ukuzama nje
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-PAX 3-Sihlalutya eyona vaporizer ye-premium efanelekileyo